Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Qoor Qoor iyo senataro ka tirsan Aqalka Sare oo galabta gaaray dhuusamareeb.. | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Qoor Qoor iyo senataro ka tirsan Aqalka Sare ...
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Qoor Qoor iyo senataro ka tirsan Aqalka Sare oo galabta gaaray dhuusamareeb..
Wararka ka imaanaya caawa magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug ayaa sheegaya in galabta gabaldhicii uu dib ugu laabtay Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo senataro katirsan Aqalka Sare .
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweyne Qoor Qoor ay la socdaan Xubno ka tirsan Senetaro ka tirsan Galmudug, waxaana ka soo baxaya warar kala duwan safarkiisa Deg degta ah.
Qoor Qoor iyo xubnaha la socda ayaa magaalada Dhuusomareeb u tagay sidii xal loogu heli lahaa xiisada soo cusboonaatay iyo abaabulka Ahlu Sunna mar kale ku dooneyso in Dhuusomareeb iyo deegaano kale ku qabsato.
Sidoo kale Safarka Qoor Qoor ayaa ku soo aadaya xili Ciidamo daacad u ah Ahlu Sunna ay galabta dagaal la’aan la wareegay magaalada Guriceel, waxaana Ahlu Sunna saraakiil katirsan ku hanjabeen in ay dib ula wareegi doonaan deegaanadii horey gacantooda ugu jirtay.
Previous articleWar deg deg ah: Ciidamada Ahlu Sunna oo goordhow la wareegtay gacan ku haynta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan,
Next articleAhlusa oo soo bandhigtay Hub laga qabsaday Maamulka Galmudug
Ciidamada Gor Gor iyo Kuwa Haramcad oo saakay mar kale laga...
Wararka ka imaanaya garoonka magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saakay mar kale Ciidamo gaaraya 200- oo ah haramcad iyo Gor Gor mar kale loo...